Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kim Jong Un sagantaan nuklera biyya isaanii kan dhugaa ta’uu isaa Ameerikaan beekuu qabdi jedhan.
Haasaa waggaa dhageessisaniin Kim, nuklera kan ittiin dhukaasan fuullee ofii kan qaban ta’uu akeekkachiisan. Odolli US guutummaan bakka nukilerri keenya dhaqqabuu danda’u US anaa fi biyya koo irratti qaruma waraana hin bantu jedhan.
Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa akka jedhanitti biyyi isaanii doorsisa Nukleraa US irraa dhaqqabu kamiinuu dura dhaabachuu ni dandeessi, humna Nukleraa kan Ameerikaan akka ibiddaan hin taphanne dhorku of harkaa qabna.
US-s kun dhugaa ta’uu beekuu qabdi jedhan. Biyyi isaanii yoo doorsisi irratti aggaamameen hala haleellaa hin geggeessitu jedhaniiru. Kooriyaa Kibbaa waliinis araaraaf qophee ta’uu isaanii ibsuu dhaan mariif balballi isaanii banaa ta’uu dubbatan.